China 5 mu 1 Type- C HUB, HDMI, USB3.0, TYPE-C PD100w vagadziri uye vatengesi |Wellink
5 mu1 Type- C HUB, HDMI, USB3.0, TYPE-C PD100w
Saizi: 65 * 45 * 11cm
Interface: 4K/HDMI, USB 3.0*3,Type-C/F PD 65w Output, Type-C PD65w pinda
Ruvara: sirivheri, tsvuku, nzvimbo grey, darkblue, rose goridhe
Input Type-C/Mukadzi,Rudzi-C PD100w
Output USB3.0*3,HDMI 4K@30Hz
Chigadzirwa saizi 65*45*11mm
Product uremu 100g
Interface 4K/HDMI, USB 3.0*3, Type-C/F, Type-C PD100w pinda
Color sirivha, tsvuku, space grey, darkblue, rose gold
• 5- mu- 1 USB- C hub & Kuwedzera Kwakakura : Iyi multiport type c adapta ine 1*30HZ HDMI vhidhiyo inobuda pachiteshi inotamisa midhiya mumasekonzi iine 3D effect, 1*100W USB- C magetsi ekutumira magetsi, 3*USB 3.0 ports yepamusoro yekufambisa data.Chosure USB C hub ndiyo yako yekufonera yakanakisa sarudzo yekuwedzera yako Macbook skrini.
• Ultra- yakaderera Temperature Control & Yakazvimirira Chip: Yakagadzirwa yakasimba aruminiyamu alloy zvinhu uye yakavakirwa-in advanced smart chip ine yakanakisa kupisa kupisa basa;tembiricha yepamusoro yeiyi USB C docking station ingori 118.4 ℉ pasi pekushanda kwakazara kwemutoro;Imwe chip yakazvimirira inodzora chiteshi chimwe chete, inotsigira basa rekushanda zviteshi zvese pasina kunonoka uye kukanganisa uye kudzivirira kupfuura-ikozvino, over-voltage, pfupi dunhu uye yakakwirira-tembiricha yekuchengeteka.
• Kutinhira 3 kusvika kuHDMI Dongle: Yakakwirisa 30Hz HDMI Technology, girazi kana wedzera sikirini kuburikidza ne30HZ HDMI video port kuti uendese zvakananga 3840 x 2160 vhidhiyo kuHDTV, monitor kana purojekita.Iwe unogona kunakidzwa zvirinani zvakatsetseka, mavara, ruzha, uye ruzivo pane 30HZ port.Uye inotsigira yakaderera pane 4K * 2K @ 60HZ resolution.
• Simba reKutumira Data: Zvitatu zve USB 3.0 zvinopindirana zvakazvimiririra zvinodzorwa nemachipisi epamusoro, iyi mhando-c splitter inogona kuisa madhisiki matatu akaoma panguva imwe chete kuti yakagadzikana uye inokurumidza kutumira data pasina kubviswa.Kumhanyisa kusvika pa5Gbps, inoenderana neUSB 3.0 2.0 senge USB deive, flash drive, wi-fi adapta, mbeva, kiibhodhi uye zvimwe zvinomhanya-pasi-.
• Inotakurika & Warranty: Plug uye tamba, chete 2.33oz, yakatsetseka compact ine saizi yehomwe zviri nyore kuseta mulaptop yako sleeve, bhegi kana homwe.Kambani yedu inopa Zvisina Chimiro mazuva makumi matatu ekudzoserwa garandi & 18 Mwedzi waranti & Hupenyu hwenguva refu chigadzirwa rutsigiro & Hushamwari Mutengi Sevhisi.Kana uine mibvunzo, tapota usazeza kutibata nesu chero nguva zvakasununguka.
Mubvunzo:Ndeipi tembiricha yehubhu kana chiteshi chese chiri kushanda?Kupisa here?
Mhinduro:Inenge 100 ℉ mushure memaawa mana ebasa, inopisa zvishoma asi inogona kugamuchirwa.
Mubvunzo:ndinogona kushandisa usb3.0 chiteshi kuchaja samsung s8?
Mhinduro:hongu, asi kumhanya kwekuchaja kwakadzikira.
Mubvunzo:Iyo bandwidth yakanaka kuishandisa kune oculus rift, inoda 3 usb 3s uye hdmi?
Mhinduro:Ndine urombo, iyo hub haishandiswe kune oculus rift.
Mubvunzo: Kusiyana nerondedzero yewebhusaiti, mumwe muongorori akanyora kuti hubhu iyi haitsigire 4k 60hz.pane mumwe angasimbisa here?
Mhinduro:Zvinoenderana.Iwe unofanirwa kutarisa maitiro ekombuta yako.Mac yangu yakaratidza 60Hz, asi laptop yangu yedell yakaratidza 30Hz, saka komputa inofanirwa kutsigira usbc 60Hz kuratidza,Pakazosvika Ndira 14, 2021.
Mubvunzo:ndinogona kushandisa pd port kuendesa adate, kana kungochaja?
Mhinduro:Iyo pd port inoshandisa chete kuchaja.
Mubvunzo:Pane here akaisa mahard drive maviri?inokurumidza here?
Mubvunzo:Iyi hub inoshanda nefoni here?
Mhinduro:Ehe, kana foni yako iri type c port.
Mubvunzo:Izvi zvinoshanda here pasina magetsi ekunze?
Mhinduro:Hongu haidi magetsi ekunze.
Mubvunzo:Ichashanda nesamsung s9 yekuunza mifananidzo kunze kwenyika?
Mhinduro:Hongu, kugadzirisa pazasi 4K kunotsigirwa.
Mubvunzo:izvi zvinogona kushandiswa ne thunderbolt 2 port?
Mhinduro:kwete, Chiteshi chakasiyana.
Zvakapfuura: HDMI chiratidzo chekuwedzera 7.5m inotsigira 4K & 2K resolution
Zvinotevera: 17 mu 1 mhando c hub usb c 3.0 station usb-c hub docking station